Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Transportation » Uber ịgbanwe ụdị ọrụ ya na Taiwan, ya na ndị ụlọ ọrụ tagzi nọ na mpaghara
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
US ịnyịnya-nkekọrịta ụlọ ọrụ Uber Teknụzụ Inc. mara ọkwa na ọ ga-agbanwe ụdị ọrụ ya Taiwan na iso ndị ụlọ ọrụ tagzi na-emekọrịta ihe, nke ga-egbochi ụlọ ọrụ ahụ ịgbagha mmegharị iwu akpọrọ "nkebi ahịrị Uber."
Firmlọ ọrụ US kwuru na nkwupụta na ya ga-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ tagzi ma jee ozi dị ka ikpo okwu teknụzụ n'okpuru usoro tagzi ịba ụba nke gọọmentị, nke na-enye ohere ngwà ngwanrọ eji agagharị na ọnụahịa dị n'ihu, ọ chọghị ka ndị ọkwọ ụgbọ ala jiri tagzi na-acha odo odo.
N'okpuru ụdị ọhụrụ ahụ, "ndị na-agba ịnyịnya agaghị ahụ mgbanwe ọ bụla na ahụmịhe ngwa ahụ ma ọ bụ ọrụ ejirila ha mee," Uber kwuru.
Mbugharị ahụ doziri esemokwu dị n'etiti ụlọ ọrụ na gọọmentị sitere na Nkeji edemede 130-1 nke Iwu Njikwa Transportgbọ njem nke malitere na June 6, nke gbochiri Uber ịnye ọrụ tagzi site na mmekọrịta azụmahịa na ndị ọrụ mgbazinye ụgbọ ala mpaghara na mba ahụ, dịka ọ nọ na-eme.
Ọ bụ ezie na enyere ohere mgbanwe, ndị mebiri iwu ndị edezigharịrị nwere ike ihu NT $ 9,000 na NT $ 90,000 malite na Sọnde, Mịnịstrị nke ationgbọ njem na Nkwukọrịta kwuru.
Banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkwọ ụgbọala 10,000 Uber na Taiwan, ozi ahụ kwuru na ọ na-enyere ndị chọrọ ịnọ na azụmaahịa ahụ ohere inweta ikike ọrụ tagzi.